Ukuqoqwa kwamasiginesha ukuthuthukisa abashayeli be-AMD | Kusuka kuLinux
Ukuqoqwa kwesiginesha ukuthuthukisa abashayeli be-AMD
pvv92 | | I-GNU / Linux, Izaziso, Amanethiwekhi / Amaseva
Abaningi bethu bangabasebenzisi abaphoxekile ngomshayeli wefa lakamuva ongu-12.6 okhishwe ngamakhadi wethu wemidwebo, izinkinga ebesizicelile ukuthi zixazululwe azizange zixazululwe futhi namakhadi ethu anqanyuliwe, entweni engiyibizayo, ukuthuka umthengi nekhasimende le-AMD.
Ngicabanga ukuthi njengabasebenzisi be-AMD namakhasimende kufanele sihlonishwe kakhudlwana, kufanele ipheshana elingcono elivela enkampanini, ngenxa yalesi sizathu, ngidale isicelo engisibeke lapha ngezansi, isicelo engithemba ukuthi abantu abaningi bazosayina nokuthi uma ukufinyelela amasiginesha angu-150, ngihlela ukuthumela i-AMD. Ukuyisayina, mane uthumele i-imeyili ku-markurujapan@gmail.com enegama lakho nesibongo nezwe ohlala kulo.
Ngibheke phambili ekubambeni iqhaza okukhulu kakhulu.
Madoda we-AMD, njengabasebenzisi bohlelo lokusebenza lwe-GNU / Linux, njengabasebenzisi bedeskithophu, abasebenzise imali yabo futhi bathembela kuwe, abathenga amakhadi emidwebo ochungechungeni lwe-radeon hd4000, 3000 no-2000, sifuna ukukhombisa ukungagculiseki ngesimo samanje sabashayeli be-radeon catalyst, asebemisiwe ngaphandle kokulungisa ngisho namaphutha anawo njengamanje. Njengabasebenzisi nabathengi, sicela ukuthi umshayeli wamakhadi ethu emidwebo athuthukiswe, ukuthi izimbungulu zamanje (ezidwengula ukudlala ngokukhishwa kwe-opengl, kungasheshiswanga i-gpu ku-chrome ne-firefox, ukusebenza okungalungile kwe-2d, ukudlalisa ukudlala ne-xvba, ukusebenza kancane nge compiz kanye kwin) zilungisiwe.
Ozithobayo, mina nabanye abasebenzisi abaningi be-Gnu / Linux sisayina lesi sicelo.
Manje usungavota kusuka ku-shintsho.org kusuka ku- lesi sixhumanisi ngendlela ephephile. Sicela uqhubeke nokusekela imbangela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ukuqoqwa kwesiginesha ukuthuthukisa abashayeli be-AMD
kulula ukuthenga i-nvidia.
futhi, i-'4 hd08xxx ayisasekelwa, uma kuqhathaniswa ne-'6 geforce 04xxx esasekelwa kubashayeli bamanje.
kepha ngisazojoyina isicelo sakho
Ngokwami, angikaze ngincome / ngithenge i-AMD / i-Ati ngqo ngenxa yenkinga yokuxhaswa, kepha into eyodwa ayisusi enye, yingakho kufanele usayine, ukuze ube nezinye izindlela ongakhetha kuzo.
Ngakho-ke lapho ukusekelwa kuthola ngokwengeziwe, maningi amathuba azoba nawo wokufeza inhloso, uma uzama ukukwenza akulimazi futhi kungaba yinto ezuzisa wonke umuntu.
Kulula kakhulu ukusho kulabo abane-desktop, kepha wonke la makhadi ayizindawo futhi sifuna abashayeli abangcono be-Linux kusuka ku-AMD
Ake sibheke ukuthi isicelo sisebenza kanjani, ayikho impi embi ukwedlula leyo engenziwanga.
Ngijoyina isicelo sakho, kepha khumbula ukuthi indlela engcono yokuveza ukungeneliseki kwethu ngomkhiqizo ukungawuthengi nokuncoma ukuthi abanye bangawuthengi.
Izikhulu ezingaphezu kweyodwa ze-AMD / ATi kumele ngabe zaphrinta isikhalazo ephepheni lasendlini yangasese.
Nge-diver yokuphathelene, ngibe nenkinga yokufuna ukwazi ukuthi ayifihli noma imise i-Vision E2 (HD 6320), futhi umshayeli wamahhala usebenzisa amandla amaningi futhi aqeda ukushisa.
UDavid Yeshael Naranjo Sanchez kusho
Ngicabanga ukuthi lokhu okuphakamisayo kuphelele kepha ngincoma ukuthi uthole amasiginesha amaningi ngoba amasiginesha ayi-150 awabalulekile
Phendula uDavid Yeshael Naranjo Sanchez
Noma kunjalo, i-AMD yinto enamandla kunazo zonke ongayithola esebenza ngamashayeli wamahhala. Futhi ngukuthi yize i-Intel inabashayeli abahle kakhulu, ukusebenza kwama-chips ayo akuqhathanisi neRadeon noma iGeForce. Ngakolunye uhlangothi ukwesekwa komthombo ovulekile kwe-nVidia kuyahlekisa (akukho).
Ngiyalusekela lolu hlelo, ngoba ngikholelwa ukuthi i-AMD isondele kakhulu emphakathini womthombo ovulekile, uma kuqhathaniswa ne-nVidia.
Isixazululo esihle kakhulu kanye nesilinganiso sengcindezi emelene nemikhiqizo ye-AMD / ATI akuyona ukuthenga, noma amasiginesha noma ubisi ...
Bengilokhu ngisebenzisa lesi silinganiso sengcindezi kusukela ngo-2005 nangePhasika eliNgcwele.
Kodwa ungisekela ngokokuziphatha…. 😉
Impela, awuzithengi bese uthini? Ukuthi abanendaba, asibona u-10% wemakethe yabo yokuthengisa ..., okuncane abakuthengisa ngenhla kanye nabashayeli abangaphansi okuhle abazokwenza, ngoba bangasho, ukuthi akekho umuntu osebenzisa iLinux othenga imikhiqizo yethu
Kuyiqiniso ukuthi i-GNU / Linux ayinayo inani elanele lamaphesenti wabasebenzisi lokuncenga kubakhiqizi njengoba usho, kepha ungakwenza kokubili. Angiyithengi imifanekiso ye-ATI, kepha ngisazobhalisela isicelo ngoba ngiyazi ukuthi kukhona abanye abasebenzisi abadinga abashayeli abangcono. I-AMD izokwazi kanjani ukuthi ngisebenzisa iNvidia? futhi ngicabanga futhi ukuthi kungcono njalo ukuba nezinketho ezisele, ngoba ngaphezu kwalokho bazoshiya umbono ongcono kulabo, abanayo leyo midwebo, abanquma ukuthuthela eLinux.
Ngisekela isicelo enginaso i-radeon hd 4670 enamathele ku-ubuntu 12.04 ngoba angikwazi ukusebenzisa abashayeli ku-ubuntu 12.10
Siyafana, le nkinga ingivimbela ekushintsheni i-distro yami iye kwenye efana ne-fedora noma i-archlinux. Ngenhlanhla Ubuntu 12.04 yi-LST.
Uma bengeke bakhiphe ikhodi yomthombo yabashayeli babo, okungenani bayabenza benze kahle futhi babasekele.
Kodwa-ke akulungile ukuthi i-AMD ayicabangi ngamakhasimende abo.
Akungcono yini ukwenza ukuqoqwa kwesiginesha yedijithali?
Noma kufanele kube yincwadi ephathekayo?
Kungalunga kepha angazi noma iyiphi iwebhusayithi ethembekile, ngabe kukhona oyaziyo?
Ngisanda kuyithumela futhi ayikaphumi. Uma iphuma kabili ngiyaxolisa kubaphathi ngenkinga yokuyisusa
Noma kunjalo, amasiginesha ayi-150 abonakala embalwa kimi. Ngicabanga ukuthi kuzofanele kube yinombolo emele kakhulu.
Kuningi ... usho ukuthini ngomshwalense?
Ukuthi idatha ayishicilelwe noma ama-imeyili asetshenziselwa Ugaxekile?
Uma kunjalo ... ungasetha ifomu le-google okulula kakhulu ukukwenza ku-Google Drayivu.
Ngithumele i-imeyili futhi sizobona ukuthi sikwenza kanjani :), uma ungangisiza, ungasiza kakhulu.
bheka i-tb kulokhu, i-tb ingahle ilunge.
Ngabe i- change.org izosebenza? https://www.change.org/es
Noma kunjalo unesiginesha yami. Yize into enhle kuzoba ukukhipha imininingwane.
Nayi ividiyo yokuthi ungawakha kanjani amafomu:
Phendula ku- quimant
Ungacabangi ukuthi lesi simo sihlupheka kuphela ku-GNU / Linux, cha mnumzane ... Ihluzo ze-AMD zinamandla amakhulu ... (lokhu lapho abashayeli bevame ukusebenza), kepha inkinga (futhi lokhu kungakhathalekile uhlelo olusebenzayo okukhulunywa ngalo) , ukuthi abashayeli bayo bayinhlekelele ephelele, ku-OSX ngokwesibonelo ihlushwa ukusebenza okungalungile ngakho-ke bakhethe imidwebo yeNvidia, kwiWindows uqobo lapho i-AMD kufanele isebenze ngokungenaphutha inezikhala zayo. Isibonelo kumakhadi omphakathi weHackintosh we-AMD yizinhloko ezinkulu kakhulu lapho.
Ngokwami, ungisekela ngokwamasiginesha, kepha kimi amakhadi emidwebo ye-AMD awasenayo inketho kuzo zombili iLinux ne-OSX.
Ngifaka isixhumanisi okukhulunywa ngaso, ukuze ukwazi ukusayina ngqo isicelo:
Ngisebenzisa i-nvidia kepha ngisabeseka
Nami ngijoyina imbangela. Njengoba bebeka ikhasi ukuqoqa amasiginesha, yisho lapha kubhulogi nawo wonke umuntu engiwazi isithangami esisebenzisana ne-GNU / Linux esungula lolu hlelo ukuze bangeze okuningi, kepha kungaba kuhle uma kungabandakanya noNvidia, labo Bashayeli Kunenkinga ethile yize ngicabanga ukuthi hhayi njenge-ATI.
Ngokwami, ngithanda iNvidia, i-AMD / i-ATI angiyithandi
Silungile ... Sengivele nginanela ibhulogi yami ne-google +
Khumbula ukuvuselela umnyango omkhulu, ukuze wonke umuntu angene kusixhumanisi futhi kungenzeki imizamo yehlukaniswe.
Silungele ... ukubuyiselwa kwempahla osekuvele kwenziwe futhi kuniselwa ngazo zonke izindlela
Futhi ku-Facebook naku-Twitter
Ngisayiniwe vele nonkosikazi wami 😉 Sengathi lesi sicelo singaba yimpumelelo.
Sengivele ngiqhubekile nokusayina, banginikeza eminyakeni embalwa eyedlule i-laptop enginayo, futhi ine-ATI, inengxenye yezinkinga ezijwayelekile ngalaba bashayeli, manje kuvela ukuthi i-HD3470 okuyiyona i-laptop yami ine, nalaba bashayeli, ingabe Bayekile, siyihlazo impela.
Ngeke ngiphinde ngithenge i-AMD noma i-ATI.
Kusayiniwe. Nginemishini emibili yedeskithophu (i-4570 ne-5770) ne-notebook (4250) futhi ukusebenza kubi kakhulu ku-Linux, kangangoba kwideskithophu engu-4250 ingenza ngaphezu kwe-5770, okungenani kimi ...
Nginochungechunge lwe-radeon hd 3000 futhi ngiyavuma, ngiyethemba ukuthi nginganikeza isiginesha yami i-xD ngineminyaka engu-15 ubudala.
Ngithatha leli thuba ukuphawula, basanda kukhipha inguqulo entsha ye-nvidia (ngokwengxenye sibonga ubuntu ne-valve) edinga ukwenziwa ngcono kwe-linux, yibaphi abashayeli abangcono? lezo ze-ati noma ze-nvidia?
Ngiyethemba ukuthi i-valve kanye nenye inkampani ejoyina imbangela inika i-Amd leyo efuna ukuthuthukisa abashayeli bayo, njengoba kwenza uNvidia ngabashayeli bayo bakamuva, kuzodingeka ukuthi babone ukuthi bayayifeza yini imisebenzi uNvidia ayithembisayo, ephakeme kakhulu kunaleyo abashayeli bangaphambilini, angikhumbuli amanani kepha bekuyinto okufanele ngijabule ngayo.
Phendula uM Munha
Uma izinto zihamba njengoba lezi zindaba zikhomba ... ngicabanga ukuthi ngeke bafake isandla sabo kakhulu kubashayeli beLinux. Bazokunika kuqala lapho bathengisa khona kakhulu.
Ingabe izindaba ziyiqiniso?
Kuleli sonto ngifunde indaba yezindaba evela kwa-AMD ethi bazogxila unyaka wonke kubashayeli hhayi ekudaleni amamodeli amasha.
Ufunde kuphi, ngingathanda ukuyifunda, okungenani ukuze ngibe nethemba 🙂
Ungawakha kanjani umhubhe weSSH phakathi kwesiphakeli seLinux kanye neklayenti leWindows